🥇 ▷ Sida loo daawado finalka Love Island 2020 khadka tooska ah: laga sii daayo Boqortooyada… ✅
Sida loo daawado finalka Love Island 2020 khadka tooska ah: laga sii daayo Boqortooyada…
Waa amaan in la yiraahdo tani waa xilli aan caadi ahayn oo ku yaal Jasiiradda Jacaylka. Waxaan leenahay xiriirinno badan oo dib-u-xirno ah, riwaayado villa ah iyo taariikho yaab leh! Diyaar ma u tahay inaad aragto qofka loo caleemo saari doono guuleysta xilliga qaboobaha? Aqri si aad u ogaato sida aad uga daawan karto Final Love Island 2020 khadka tooska ah meel kasta oo adduunka ah.
Waa ku filan tahay safarka jasiiradleyda, gaar ahaan Siannise, Mike, Paige iyo Jess oo iyagu halkaas joogay bilowgii! Of & apos; Waxyaabaha ‘Flash news’, caqabadaha carruurta iyo ka soo kabashada lama filaanka ah ee loo yaqaan ‘Casa Amor’ ee caanka ah, dadka deggan jasiiradu waxay leeyihiin khibrad xiiso leh oo madadaalo ah Pulau Cinta.
Markii waqtigeedii ku yaal Koonfur Afrika Villa raaxo leh uu dhammaado, kaliya lamaane ayaa loo caleemo saari karaa guuleystaha Isle of Love. Iyo intaas, abaalmarin lacageed oo cajiib ah oo ah £ 50,000.
In kasta oo, dabcan, ay jirto hoos u dhac weyn oo taxanahan ah geerida naxdinta leh ee ku timid safiyihii hore Caroline Flack. Sidaa darteed bandhigga caawa wuxuu u noqon doonaa mid xiiso badan sida show farxad leh.
Diyaar ma u tahay inaad aragto finalka? Sii wad xoqista sida aan kuu sheegayno sida loo daawado Final Love Island 2020 khadka tooska ah, ha ahaato UK ama dibadaba.
Sidoo kale fiiri: Sida loo daawado RuPaul Drag Race UK
Sida loo daawado finalka Love Island 2020 khadka tooska ah ee Boqortooyada Midowday:
Haddii aad joogi doontid Boqortooyada Midowday marka hawadu u dambaysay ee Final Love Island 2020, daawashada ma fududaan. Kusoo uruur asxaabtaada iyo reerkaaga telefishinka saacadda 9-ka saac Axadda, Febraayo 23 oo dhagayso ITV2.
Laakiin haddii aad doorbideyso inaad fiirsato dhacdooyinka ugu dambeeyay ee khadka tooska ah, waxaad si fudud ugu qabsan kartaa websaydhka ITV ama waxaad ku daawan kartaa aaladdaada gacanta adoo u maraya ITV Hub Codsiyada aad halkan kala soo bixi karto Android iyo halkan iPhone ama iPad-ka.
Qaab kale oo looga daawan karo ITV khadka tooska ah waa adoo galaya TVPlayer.com: Xaqiiqdii waxaan door bidnaa doorashadan sababtoo ah qulqulka ayaa u muuqda mid tayo sare leh oo xoog badan. Sidoo kale waa goob dhakhso badan, wax ka qabata, uguna dhakhso badan si aad u kacdo oo aad u socodsiiso. Wali waa lacag la’aan iyo sharci ahaanba.
Sida loo daawado Final Love Island 2020 khadka tooska ah ee dalka dibadiisa:
Haddii aad ka timid Boqortooyada Midowday oo aad qorsheyn jirtay fasax inta lagu gudajiro jasiiradda Jacaylka ee sannadka 2020, kaama masaysiin doonno maxaa yeelay waxaad si toos ah ula macaamilayso qabowga iyo cimilada roobka; Waxaan kuu sheegi doonnaa sida aad u wanaajin karto ugana fogaatid carqaladeynta juquraafi-ku-haynta. Adigoo adeegsanaya VPN, waxaad u badali kartaa cinwaankaaga IP-ga mid ka mid ah Boqortooyada Midowday oo kuu oggolaaneysa inaad socodsiiso dhacdooyinka adoo adeegsanaya koontadaada ITV. Sii wad akhriska waxaanan ku tusaynaa sida.
Waa kuma Jasiiradda jaceylka jiilaalka jiilaalka ee 2020?
Siannise Fudge, 25 jir ka yimid Bristol
Finnley Tapp, 20, Milton Keynes
Jess Gale 20 London
Paige Turley, 22 jir ka soo jeeda Scotland
Mike Boateng, 24 waa Manchester
Luke Mabbott, 24 jir ka Middlesbrough
Luke Trotman, 22 jir Luton
Demi Jones, 21, jir ka yimid Portsmouth
Priscilla Anyabu, 25 jir ah London.
Ched Uzor, 23 jir, Surrey
Yaa laga saaray tuulada?
Ollie Williams, 23, kana timid Cornwall
Eve Gale 20 London
Connagh Howard, 27 oo Cardiff ah
Connor Durman, 25 sano jir ka yimid Brighton
Leanne Amaning, 22 jir ka timid London
Sophie Piper, 21 jir Essex
Wallace Wilson, 24, ka Inverness
Nas Majeed, oo 23 jir ah kana yimid London
Rebecca Gormley, 21 jir Newcastle ah
Jordan Waobikeze, waa 24 jir London ka yimid
Shaugnha Phillips, 25 London
Natalia Zoppa, 20 jir ka timid Manchester
Jamie Clayton, 28, oo ka soo jeeda Edinburgh
Molly Smith, 23, jir ka Manchester
Callum Jones, 23 jir ka yimid Manchester
Kumaa ku guuleystey jasiiradda jaceylka 2019?
Amber Gill iyo Greg O apo; Shea, iyo inkasta oo ay hada u jajabeen siyaabo, hadana waxaa aamin ah in qof walboo ay jecelyihiin lamaanaha in muddo ah. Amber waxay soo gashay villa maalintii koowaad, iyo in kasta oo ay ku dhibtooday, dhab ahaantii way kor uga kacday markii loo magacaabay guuleystaha, Greg wuxuu galay villa markii 43aad.
Maxey ku guuleysteyaasha jiilaalka jiilaalka jiilaalka 2020 UK helaan?
Marka laga soo tago helitaanka asxaabtooda nolosha, dabcan, waxay sidoo kale helayaan 50,000 ginni oo ay dooran karaan inay la wadaagaan lamaanahooda ama naftooda u badbaadsadaan. Iyo, dabcan, waxaa loo caleemo saaray guuleystayaasha sanadka oo hubaal ah inay ku dhici doonaan jasiiradda Jacaylka ee Jacaylka.